MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Super Double Data Pack mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Super Double Data Package ဆို သည်မှာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာမည်သည့် package ဝယ်ဝယ် ဒေတာ နှစ်ဆ (100% Bonus)ရနိုင်မည့် ပက်ကေချ့်များဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုတိုင်းအတွက် ပိုမိုစျေးနှုန်းသက်သာစွာ အသုံးပြုနိုင်သလို ဝယ်ယူတိုင်းမှာလည်း မူလပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Super Double Data Pack ကိုအခုပဲဝယ်ယူလိုက်ပါ
Super Double Data Packကို ဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ။
သင့်အနေဖြင့် Super Double Data ပတ်ကေ့ချ်ကို *888#ကိုခေါ်ဆို၍ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၄) ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ ဖြစ်ပါသည်။
၁။ မည်သည့် Super Double Data Pack ကိုမဆို ဝယ်ယူပါက Double Data (မူလဒေတာ+ Super Bonus Data) ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပက်ကေ့ချ်၏ မူလဒေတာနှင့် သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်း သယ်ဆောင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၂။ Package ၏ မူလဒေတာသက်တမ်းပမာဏမှာ ၃၀ ရက်ဖြစ်ပြီး Package သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်သောကာလမှာ (၇)ရက် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ Bonus Data ၏ သက်တမ်းပမာဏမှာ ၇ ရက် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ မူလဒေတာနှင့် Super Bonus Data ပမာဏကို အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅။ Super Double Data ပက်ကေ့ချ်များကို အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပက်ကေ့ချ်အသစ်၏ နောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၆။ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်သော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ၇ ရက်) အတွင်း Super Double Data ပက်ကေ့ချ်အသစ်ဝယ်ယူပါက အသုံးပြုရန် ကျန်ရှိနေသော မူလဒေတာ ပမာဏကို နောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Super Bonus Data အတွက် ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့်မရှိပါ။
၇။ ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက်)အတွင်း ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၈။ Super Bonus Data အချင်းချင်း၏ သက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကို ယင်း၏ သက်တမ်း ကာလ (၇) ရက် အတွင်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Super Bonus Data နှင့် မူလဒေတာကိုပေါင်းစည်းအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
၉။Super Double Data Package များကို မည်သည့် channel မှ မဆို ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ထိပေါက် chance ၁ခု ရရှိကာ MPT4U တွင် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁၀။ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA Prepaid/Postpaid အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁၁။ CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၂။ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားသော ပက်ကေ့ချ် ကို ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့ မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ အခြား Super Double Data Packages များ ၏ Promotion ကာလမှာ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်နေ့မှ MPT မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိဖြစ်ပါသည်။
၁။ Super Double Data Package ဆိုတာ ဘာလဲ?
Super Double Data Package ဆိုတာကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘယ် package ဝယ်ဝယ် ဒေတာ နှစ်ဆ (100% Bonus)ရရှိ နိုင်မယ့် ပက်ကေချ့် များ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုတိုင်းအတွက် ပိုမိုစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အသုံးပြု နိုင်သလို ဝယ်ယူတိုင်းမှာ လည်း မူလပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
၃။ Super Double Data Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
၄။ လက်ကျန်ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်၏ မူလဒေတာ နှင့် Super Bonus Data လက်ကျန်ပမာဏ နှင့် သက်တမ်း ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ MPT4U မှ ပက်ကေ့ချ်၏ မူလဒေတာ နှင့် Super Bonus Data လက်ကျန်ပမာဏ နှင့် သက်တမ်း ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
၅။ Super Double Data ကိုဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ?
၆။ Data Carry Plus Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
Customer Journey and data acquisition state
၇။ Super Double Data Pack ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
Super Double Data Pack များ တွင် မူလဒေတာနှင့် Super Bonus Data ဆိုပြီး ဒေတာပမာဏ ပုံစံ (၂) မျိုးပါ၀င်ပါသည်။
Package၏ မူလဒေတာ သက်တမ်းက (၃၀)ရက်ဖြစ်ပြီး ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလမှာ(၇)ရက် ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ အသုံးမပြုရသေးတဲ့ ဒေတာတွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာလဲ?
၉။ Super Double Data Pack ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရပါသလား?
၁၀။ Super Double Data Package များကို ဝယ်ယူပြီး ထိပေါက်အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါသလား?
၁၁။ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ ၉၉၈ကျပ်ဖြင့် Super Double Data (905MB+ 905MB) ပက်ကေ့ချ် ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာ MPT4U App ၏ Order History တွင် “Super Double Data 1000MB”လို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ Super Double Data (1000MB+1000MB) အတိုင်း သုံးစွဲခွင့် ရမှာ လား?
ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားသော ပက်ကေ့ချ် ကို ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့ မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။